Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-agagharị na nkwụnye ọkụ na-emepụta ihe nkiri RF
Home / ngwa / Nkọwa na-aga n'ihu / Itinye n'ọkwa preheating pupụtara na mma
Category: Nkọwa na-aga n'ihu Tags: nkwalite ịmalite ịmalite, itinye preheating mma, igwe onu ahia ndi mmadu, usoro ntinye aka na mbu, usoro nkpuchi mmeghe, preheating UM UBARA, preheating UM UBARA INduction, igwe eji abanye preheating, mma preheating
Ngwunye na-ekpo ọkụ na mgbakwunye na nkwụnye ụkwụ na ngalaba na-ekpo ọkụ
Ebumnuche Na-ekwupụta ụdị ọdịdị dị iche iche na mma maka ogige ngwaọrụ
Ihe dị iche iche nke 0.16 "(4mm) dị arọ
Okpomọkụ 1562 ºF (850 ºC)
57-80 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa • DW-HF-15kW usoro ntinye ọkụ, nke nwere isi ọrụ dịpụrụ adịpụ nwere ihe isii 1.0 μF maka ngụkọta nke 6.0 μF
• Ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, e mepụtara ma mepụtara maka ngwa a.
A na-eji usoro dị iche iche dị iche iche eme ihe maka ngwa a kpo oku
• Akpụkpọ ụkwụ pancake abụọ maka agụba
• Epeepe akwụkwọ mpịakọta nke okpukpu asatọ maka akara
A na-etinye iberibe n'ime eriri ha kpọmkwem maka kpo oku. Maka pupụtara, a ga-ewepu oghere dị n'etiti na 1562 ºF (850 ºC) yana maka mma 2/3 nke agụba ga-ewe iwe. Dabere na ibe ahụ, nchara ruru 1562 ºF (850 ºC) na 13-19 sekọnd. Mgbe ejiri igwe mee ihe ọfụma, a na-azọ ya.
• Mmekọrịta profaịlụ nke a na-edozi
• Oge na-agba ọsọ
Ngwongwo Ugbo Ogwu Na-eme Ka Ikuku